Akụkọ ụwa – Page 24 – hoo!haa!!
Akụkọ ụwa (Page 24)
Onye ndu otu ahụ na-achọ nnwere onwe Biafra akpọrọ ‘Biafra Zionist Federation, BZF, n’aha nkenke bụ Benjamin Ọnwụka enyela gọọmenti etiti otu izu ụka, ka ọ hapụ ka ha ra bụ ndi ọ na-anụ ọkụ n’obi iwube mba Biafra, bụ ndi eji eji ugbua n’ụlọ mkpọrọ dị iche iche n’alaRead More →
Bishọọpụ a sị lụrụ nwanyị abụọ ebutewo nsogbu n’ụka
Udo adịghịzị n’ụlọụka ndi Anglịkan KraịstChurch Cathedral, Akwete,dị na Dayọsis Ụkwa, Abịa Steeti. Ndi ụka ahụ na-ebuso bishọọpụ ha bụ Rt Rev Samuel Kelechi Eze agha. Ha machiela ya ịka ụka ma ọ bụkwanụ mee ihe ọbụla n’ụlọụka ahụ n’ihi ebubo a na-ebo ya na ọ lụrụ ụmụnwanyị abụọRead More →
ONWEGHỊ IHE GA-EGBOCHI IKPE BUHARI NA BURATAI IKPE MAKA BIAFRA – Bruce Fein
otu onye ọka-iwu amaara ama na mba Amịrịka bụ Bruce E. Fein ekwuela na onweghị ya ịla azụ na mbọ ya na-agba ịhụ na ekpere onye isi ala Naijira bụ Muhammadu Buhari na onye isi ndi agha ala anyị bụ ọchị-agha Tukur Yusuf Buratai tinyekwara mmadụ iri na ise ndiRead More →
MAKARFI EBEERELA ALA IGBO AKWA
Aka ahụ chịburu steeti Kaduna na mbụ, ma bụrụkwa onye PDP nwere olile anya ịzọ ọkwa onye isi ala Naijiria, bụ Ahmed Makarfi ekwuela na ya ahụla ntarama ahụhụ dịṅ na isoro okporo ụzọ mee njem na mpaghara ala Igbo. Nwa-amadị a bụ sinetọ Makarfi nọrọ ụnyahụ kwue ihe ndiRead More →
HOOHAA! OHERE ADỊGHỊ N’OBI GỌỌMENTI ENUGWU – Bishọp Chukwuma
Bishọp ukwu ndi ụka Nglịkan na-ahụkọta dayọsis ndi dị na mpaghara Enugwu, bụ Dọkịnta Imanuel Chukwuma agwala onye jigodu ọkwa onye isi ala bụ Ọkammụta Yemi Osinbanjọ na ohere adịghị n’obi gọọmenti nke steeti Enugwu. Bishọp Chukwuma kwuru nke a ụnyahụ bụ Satọdee. Ọ sịrị na afọ juru ndi steetiRead More →
NDI UWE OJII ANWỤCHIELA MMADỤ ATỌ JI “ENYEM-AKA” EZU N’ENUGWU
Ndi uwe ojii nke steeti Enugwu ejichikọọla mmadụ atọ aka ọrụ ha bụ isi n’ụzọ ha kpọrọ enyemaka, nara ndi mmadụ akwụkwọ eji adọrọ ego n’ụlọ akụ, ana-akpọ ATM, N’Enugwu. Mgbe ọ na-ekwu okwu n’Enugwu ụnyahụ, ka ọnụ na-ekwuru ndi uwe ojii n’Enugwu, bụ Ebere Amaraizu sịrị na ndi uweRead More →
AGBAGBUELA OTU ONYE WELITERE ISI N’ OTU NDỌRỌ NDỌRỌ ỌCHỊCHỊ APC NA STEETI EKITI
Agbagbuela otu nwoke so n’ọnụ na-ekwu n’otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị APC, na steeti Ekiti. Aha ya bụ Kọmred Bunmi Ojo. Nwoke a bụbu onye enyemaka pụrụ iche nke aka chịburu steeti Ekiti, bụ Shegun Oni, ka-agbagburu na abalị ụnyahụ bụ Faraidee. Ọbụ ndi oji egbe eje, amatabeghị ndi ha bụ gbagburuRead More →
ENUGWU: ỤLỌ ỌRỤ ‘INEC’ AKPỌỌLA OKU KA NDI MMADỤ BỊA WERE AKWỤKWỌ NHỌPỤTA HA
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhọpụta ala anyị akpọrọ INEC n’aha nkenke, akpọọla ndi bi n’Enugwu oku ka ha were ọsọ were ije bịa were akwukwo ikike nhọpụta ha dị n’aka ụlọ ọrụ ahụ ugbu a Onye isi ndi ụlọ ọrụ INEC na steeti Enugwu bụ Emeka Ọnọnamadu nọrọ n’Enugwu, n’ụbọchiRead More →
N’ụwa niile gbaa gburugburu, mmadụ ịgba naarị afọ adịghị fecha fecha. Ana-eweputa oge, soro onye dị etu a ñụra nke bụ ezigbo ọñụ. Mana Chi abụghị otu, nke akara aka ji abụ ofu! Ya mere na otu nwa amadị nke aha ya bụ Mazi Selesin Egbunuche nọrọ na nnukwu ịtaRead More →
A CHỤRỤ DAỤRA MAKA ỊKPARỊ OSINBAJỌ
Eziokwu apụtala ihe maka ihe mere e jiri chụọ Alahaji Lawal Daụra bụbu Ụlọọrụ nchekwa nzuzo Naịjiriya a kpọrọ Department of State Security (DSS) ụnyahụ. Onye nọgodu n’ọkwa ka Onyeisiala, Ọkammụta Yemi Osinbajọ kpọrọ ọgbakọ ndi ọrụ nchekwa iji kpaa banyere mwakpo ndi ọrụ DSS wakporo Ụlọ Nzuko Omebeiwu AlaRead More →
NA STEETI DELTA, AMALA MMADỤ ABỤỌ IKPE ỌNWỤ
Ụlọ ikpe ukwu dị na Wọrị na steeti Delta, amala otu nwata akwụkwọ na otu onye ọkwọ ụgbọ-ala ikpe ọnwụ. Mmadụ abụọ ndi a bụ Colịns Okoro na-agụ akwụkwọ maka ego na nchekwa ego n’ụlọ akwụkwọ Politekinik nke Steeti Delta dị n’Oghara; nakwa Ejemuta Adamu Ogofure, onye ọkwọ ụgbọ-ala maRead More →
E mebiela ehi nwụrụ anwụ e budatara na Pọt Hakọọtụ
Pọt Haakọọtụ: Ndi ọrụ nchekwa ahụike nọrọ na Pọt Hakọọtụ mebie ehi ndi nwụrụ anwụ e siri n’Ugwu Awụsa budata na Rivas Steeti. Site na nchọpụta anyị, ehi ndi ahụ e jiri gwongworo budata bụ ndi nwụrụ na mkpa mkpa ideyi mmiri kpara na steeti ụfọdụ n’Ugwu Awụsa dịka KebiRead More →
NDI ỤKA AKWAPỤLA BISHỌP N’ỤLỌ ỤKA
Ihe nkiri mere n’ime otu ụlọ ụka ụbọchị ụka gara aga, na mpaghara Nyandarua nke Kenya; mgbe ndi ụka kwapụrụ bishọp ha n’ụlọ ụka. Nke a mere n’ụlọ ụka akpọrọ African Indipendent Pentecostal Church of Africa (AIPCA), Mgbe esem-okwu ikpa otu dapụtara n’etiti ndi ụka ahụ Mgbe bishọp Ayub KigothoRead More →
NNUKWU ỤKỌCHUKWU N’ARỤSỊ AGBAALA MGBA
Otu nnukwu ụkọchukwu bụ bishọp Nelson Nnanna, edeputala n’ọba ozi ‘facebook ya’, ka o si lụsọ okwu-arụsị ọgụ ma merie ya n’Arọndizuọgụ, n’okpuru mchịchị ime obodo ideatọ nke steeti Imo. Bishọp Nnanna bụ onye isi n’ụlọ ụka ‘Soulwinners International Church’ dị n’Owere bụ isi obodo steeti Imo. Nnukwu ụkọchukwu aRead More →
OHERE ADỊGHỊ N’OBI GỌỌMENT ENUGWU! – Mbaka
Onye ndu ogige ekpere ndi ụka katọlik n’Enugwu, akpọrọ ‘Adoration Ministry Enugu Nigeris’, (AMEN), bụ Rev. Fr. Ejike Mbaka, nọrọ n’Enugwu ụnyahụ bụ ụka kwue hoohaa, na ohere adịghị n’obi gọọment steeti Enugwu, n’afọ puku abụọ na iri na itolu na-abịa abịa. N’okwu ya, aka na-achị yabụ steeti bụ IfeanyịRead More →
AKA AKPARALA ONYE OHI BỊARA N’ỤDỊ ỤKỌCHUKWU
N’ụnyahụ ka-anọrọ nwụchie otu nwikorọbịa bịara izu ori n’ebe ana-echi ndi ụkọchukwu, nke kere ekike dịka ụkọchukwu. Mgbe aka kpara nwoke a, n’ụlọ ụka ukwu ‘Maria Asumpta Cathedral’ dị N’Owere, na syeeti Imo. Ndi nche mere ka nwoke a were anya ya hụ ntị ya ma were eze ya taaRead More →
MBA GANA EBURULA BATA: NAIJIRIA GA-ALARỊRỊ
Ụmụ Naijiria bi n’akụkụ Ashanti nke mba Gana, ma na-azụ ahịa n’ebe akpọrọ ‘Suame Magazine Market’ na Kumasị, chịzịkwa uche n’aka maka na ndi Gana na-ebuso ha agha ugbu a. Ka ihe sị gbata kwụrụ n’ebe ahụ kịta, ndi Gana añụọla ya dịka iyi were kwue na ndi ọbịa haRead More →
NDI OJI EGBE EJE EDULALA OTU ONYE ISI PASTỌ MỤỌ
Ndi oji egbe, agbagbuela otu onye pastọ na onye amụma ama ama na Naijiria nakwa ọtụtụ mba ụwa ndi ọzọ. Ọbụ n’ebe obibi ya dị na Patakọtị nke steeti Rivers ka anọrọ were egbe dulaa nwoke a mụọ Aha nwoke a bụ ThankGod Abam. Ejikwa ọtụtụ aha otutu mara nwokeRead More →
STEETI ENUGWU: EGWU NDI FULANI EJIDELA NDI NENWE
Ndi Nenwe dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Anịnri na steeti Enugwu na-ebizi n’iwe n’ọnụma maka na ndi uwe ojii, ngalaba na-ahụ maka igbochi ndi oji egbe ezu akpọrọ FSARS n’aha nkenke, bịara nwụchikọọ ụfọdụ ndi obodo ahụ. “Arụ ha mere” bụ na ha chọrọ igba mbọ ịkwụsị ndi nchị ehiRead More →
APC EMEWALA ỤMỤ NAIJIRIA OBI – Bishọp Ezeọfọ
Bishọp ụka Nglikan na Dayọsis Agụata bụ Rt. Rev. Samel Ezeọfọ akpọọla oku ka ụmụ Naijiria gbarapụ otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ‘All Progressive Congress’ (APC) na nhọputa nke afọ puku abụọ na iri na itolu na-abịa abịa, n’ihi na otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ahụ emewala ụmụ Naijiria obi n’ime afọ anọ ọRead More →